Madaxda Dowlad Goboleedyada ayaa ka wada hadlay nabada iyo xasiloonida Gobolka harooyinka waa weyn ee Afrika. - Amjambo Africa
Madaxda Dowlad Goboleedyada ayaa ka wada hadlay nabada iyo xasiloonida Gobolka harooyinka waa weyn ee Afrika.
Waxaa qora: Jean Damascene Hakuzimana
Madaxweynayaasha Museveni (Uganda), Kagame (Rwanda), Joao Lourenco (Angola) iyo Felix Tshisekedi (DR Congo) waxay kulmeen gebi ahaanba Oktoobar 7 si ay uga wada hadlaan nabadda iyo amniga Gobolka Harooyinka Waaweyn ee Afrika. Kulankooda ayaa sii waday wadahadalada loogu talagalay xal u helida xiriirka sii socda ee u dhexeeya Rwanda iyo Uganda, iyo sidoo kale sidii xasillooni looga abuuri lahaa mucaaradka aadka u gumeysta.
New Vision ayaa qortay in Felix Tshisekedi oo reer Congo ah uu martigaliyay shir madaxeedka. Wuxuu ka soo qeyb galay magaalada Goma, caasimada Koongada Woqooyiga Kivu, oo ah aag cariiri ah oo ay ku nool yihiin boqolaal ka mid ah kooxaha fallaagada ah ee barakiciyay malaayiin dad ah – qaar ka mid ahna ay gabaad ka heleen Maine. Sida ku xusan war murtiyeedka ka soo baxay kulanka, madaxda dowlad goboleedyadu waxay dib u soo cusbooneysiiyeen dadaalkooda ku aadan ciribtirka kooxaha hubeysan ee ka howlgala gobolka.
Uganda, DR Congo, Rwanda, iyo Burundi waxay wadaagaan xuduudo, kooxaha hubeysan ee ka soo goosanaya hal wadan ayaa inta badan mar kale ka soo muuqada wadan kale, xaalad ku qasbeysa dowladaha inay wax wada qabtaan. Madaxweynayaasha ayaa sidoo kale isku raacay in laga hortago shabakadaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee ka dambeeya ka faa’iideysiga sharci darada ah ee kheyraadka dabiiciga ee gobolka, taasi oo si dadban gacan uga geysata rabshadaha.
Madaxdu waxay caddeeyeen inay dareemayaan inay khasab ku tahay inay iska kaashadaan joojinta rabshadaha soo noqnoqday iyo in la dejiyo xasilloonida gobolka, si loo dhiirrigeliyo ganacsiga iyo maalgashiga. Shirka ayaa markii hore loo qorsheeyay sidii qof-isu imaatin, laakiin COVID-19 ayaa ku riixay qaab muuqaal ah. Madaxweynaha Evariste Ndayishimiye ee Burundi wuxuu diiday inuu kaqeyb galo kulanka laakiin wuxuu lakulmay Wasiirka Arimaha Dibada ee Congo, oo safray Burundi kahor shirkii.
Burundi, DR Congo, Rwanda, iyo Uganda ayaa ah aagga lagu tilmaamo gobolka harooyinka waa weyn ee Afrika. Amjambo Africa ayaa horay uga warbixisay xirnaanshaha xuduudaha u dhexeeya Rwanda iyo Uganda oo hakad galiyay ganacsiga xuduudaha. Xiriirkii u dhaxeeyay Burundi iyo Rwanda ayaa kala jabay kadib isku daygii afgembi dhicisoobay.
PreviousQaramada Midoobay ayaa sheegtay in tilaabooyinka loo qaaday dhanka bogsashada qaran ee Koonfurta Suudaan aysan ku filneyn
NextWaa maxay caymisku, si kasta?